Muchidzidzo ichi, isu tichaona yedu yeGerman Vhidhiyo Chidzidzo chakatumidzwa ChiGerman Alphabet, Tsamba dzeGerman. Kunyangwe arufabheti yechiGerman iri chidzidzo chekutanga cheGerman, kudzidza mushe kunoderedza kukanganisa kududzira.
Izvo zvinodikanwa chaizvo kuti kududzwa chaiko kuti udzidze akasiyana masitayera ekududzira anoitika pamwe nekukwiridzirwa kwemamwe mavara.
Usati waenda kuIndaneti yemavhidhiyo video, regai tikupei chiGerman chimiro uye chidimbu chechiGerman.
GERMANY SHAMWARI NOKUDZIDZA
ß: ss (mune dzimwe nzvimbo zvakanyorwa ss.)
Aya madudziro anotevera anowanzo shandiswa pamwe nekubatanidzwa kwemamwe mavara muchiGerman.
Izvo zvinotevera ndizvo zvinowanzoonekwa uye panewo kuverenga kwakananga kwemashoko ari pedo nemumwe.
ei: verenga semwedzi
kureva: kuverenga sai
sch: verenga se
ch: verenga se h
z: verenga se ts
au: verenga se o
ph: verenga f
sp: verenga s sp
st: verenga sediki
Cherechedza: Tsamba ä, ü, ö mumutauro wekuGermany ndewemlaut-mavara mavara e (oro).
Zvino, tevera vhidhiyo yedu uye edza kudzidza mazwi emudzidzisi wedu uye nzira dzezvakabuda.
Zvakare, ita chokwadi chekutarisa mavhidhiyo edu anonzi Alphabet yechiGerman nenziyo panzvimbo yedu.